7 Matipi Ekubudirira Dhijitari Coupon Kushambadzira | Martech Zone
7 Matipi Ekubudirira Dhijitari Coupon Kushambadzira
Muvhuro, March 23, 2015 Douglas Karr
Shamwari yakanaka Adam Mudiki ane nharembozha yekushambadzira chikuva izvo zvinoona zvisingaite kuregererwa mitengo paSMS mameseji anopa. Imwe nzira yaakandiudza pamusoro peiyo mutengi iyo yakapa iyo uya neshamwari govera kwawakagashira yemahara kuzunza iwe pawakaunza shamwari kunzvimbo. Ivo vaitumira iwo meseji kunze kwehafu yeawa pamberi pekudya kwemasikati uye panogona kuve nemutsara kunze kwemukova. Iyo ipfungwa yakanaka nekuti hausi kungo tarisa munhu anosvetuka pamutero, urikutora mutsva patron uyo anozoedza chikafu chako!
Colourfast, anodhinda kadhi anodhinda muCanada, yakagadzira infographic inonzi Dhijitari Couponi ari Kutyaira Nhare uye Omni-Chiteshi Kutengesa iyo inofamba kuburikidza nekushandisa uye manhamba ane chekuita nedhijitari coupon yekushambadzira nzira. Iyo infographic inopa izvi 7 Matipi Ekubudirira Dhijitari Coupon Kushambadzira:
Sangana pamwe neemail - Iva nechokwadi chema digital coupon anobatana neemail evatengi vako. Kutora kero yeemail kunokupa iwe mukana wekugara uchizvigadziridza pane zvakakosha uye nezvibodzwa zvakare!
Sanganisira Kukwidza Kwekuona - Sanganisira logo yako kana mapikicha ezvigadzirwa zvine hushingi, zvine mavara mavara uye mafonti ayo anokanganisa vatengi.
Target Vatengi - Iine geo-yekuvavarira, mabhizinesi anokwanisa kutora mukana wevatengi nzvimbo kununura makuponi pavanenge vari padhuze!
Partner neMugovera - Coupon services ine mikana mikuru yekuparadzira yekuwedzera kwako kusvika.
Shandisa Meseji Mameseji - Gadzira chirongwa chevatengi chinoita kuti vanzwe sekunge ivo chikamu chekirabhu yakasarudzika uye uvape zvakasarudzika zvinopihwa.
Kurudzira Kugovana - Sanganisa mabhatani enhau enharaunda kuti ubvumire-kamwe-chete kugovana pasocial media mapuratifomu.
Pima Zvabuda - Sezvo kusimudzira kwega kwega kunosvika zuva rekupera kwayo, ona zvinoshanda uye chii zvisina kushanda uye kukwidziridza yako inotevera mushandirapamwe.
Tags: kopanicoupon marketingdigital coupondigital coupon kushambadziraemail Couponsmapepanhau emapepanhauSMSsms couponssms discountszvinyorwa zvemavaramameseji mamakonimeseji inotapudzameseji inopamamesejivalpak
Nei Vanhu Vakamira Kutevera Chako Brand?
Teerera uye Target Mikana pa Twitter neSocialCentiv